Kaarka Wareegga Shiinaha Soosaarida Warshad iyo Warshad | KAISHENG PCB
Daahan birta: ENIG
Lakabyada: 6 PCB Lakabka
Waxyaabaha aasaasiga ah: Caadiga ah TG FR-4
Dahaarka birta: ENIG Qaabka wax soosaarka: SMT + Lakabyada: 6 PCB Lakabka
Waxyaabaha Saldhigga: Caadiga ah TG FR-4 Shahaadada: ISO, RoHS MOQ: Maya MOQ
Noocyada Kala-Bixiyaha: Laydh-la'aan (RoHS u hoggaansamaysa) Adeegyada Hal-Joogsi ah: PCB + Qaybaha + Golaha Tijaabinta: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Taageerada Teknolojiyada: DFM oo bilaash ah Noocyada Shirarka: SMT, THD, DIP, Teknolojiyada Isku-dhafan ee PCBA Heerka: IPC-a-610d
Erayoxul: Kharashka waxsoosaarka PCB, Nidaamka Golaha PCB, Tirakoobka PCB, Soosaarayaasha Golaha PCB, Iskuxirka PCB / Qiimaha Tijaabada, qiimaha qaybaha, Shirkadaha Golaha Gudiga Daabacan.
Adeegga gogosha PCB noocooda
PCBFuture waxay kaa caawin kartaa inaad ka dhigto alaabadaada inay suuqa ka galaan si ka dhaqso badan kuwa kula tartamaya, sidoo kale waxay yareyn kartaa qiimaha. Adduunku si ka dhakhso badan ayuu ushaqeynayaa weligiisna kahor. Guud ahaan, shirkadda suuqa soo gasha ayaa marka hore hesha saamiga ugu badan ee faa iidada. Marka aan nahay PCBFuture, waxaan rabnaa in aan kula socono oo aan ku siino wax soo saar dhaqso ah oo PCB ah iyo adeegyo iskuxirka guddiga korantada.
Ekhibrad leh shaqaale
Waxaan si gaar ah ugu xilsaarnay injineer mas'uul ka ah mashruuc kasta oo waxaan ku siin karnaa ikhtiyaarro isku dhafan oo macaamiishayada ah. Kooxdayada injineernimada waa xirfadlayaal lagu kalsoonaan karo oo ku filan inay qabtaan DFM, injineernimada, wax soo saarka iyo baaritaanka.
Waxaad heli kartaa adeegsiga PCB iyo PCBA-ga ugu dhaqsiyaha badan toddobaad ama maalmo. Guud ahaan, waqtigeenna bixinta waa 3 toddobaad, laakiin maahan bilo. shaqadeenu waxay kaa caawin doontaa inaad hesho tusmooyinkaaga PCB-gaaga ka dibna samee tijaabooyin dhakhso leh, taas oo macnaheedu yahay inaad si dhakhso leh u iibin karto alaabadaada elektaroonigga ah.
Iyada oo loo marayo godka PCB
PCB noocooda ah
Iskuxirka PCB Soo-celinta Degdega ah
Maxaa noo ah Golaha nooc PCB adeeg?
PCBFuture waxay khabiir ku yihiin daabacaadda adeegga shirarka fiilooyinka. Iyada oo la kaashanayo farsamayaqaanadeena alxanka xirfadleyda ah, SMT Injineerada gacanta ku haya iyo khubaro soo saaraya qaybaha, waxaan ku bixin karnaa isku imaatinka PCB qiimo jaban, geedi socod isku dhafan oo aad u jajaban oo leh adeeg albaab-ilaa-albaab ah.
PCBFuture waxay uqalantay inay maamusho nidaamka PCB-ga oo dhan, oo ay kujiraan soosaarida dhamaan qaybaha (PCB iyo qaybo), iskuxirka PCB, xakamaynta tayada, baaritaanka shaqeynta iyo gaarsiinta. Haddii aad u baahan tahay oraah degdeg ah, waxaad codsan kartaa 24 saacadood xigasho. U dir emaylsales@pcbfuture.com
Hore: Shiinaha Daabacan Daabacidda Golaha Golaha Golaha Soosaarayaasha Soosaarayaasha - Kaarka Wareegga Assia - KAISHENG
Xiga: Iskuxirka guddiga xakamaynta